Boliiska oo ka Cawday Tarxiil Suurtageli Waayay Hirgelintiisa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Boliiska oo ka Cawday Tarxiil Suurtageli Waayay Hirgelintiisa
La daabacay onsdag 25 april 2012 kl 09.58
Sven-Åke Eriksson. Sawirle: Firas Jonblat.
Kadib dhowr jeer oo la isku dayey sidii muwaadinka falastiiniga ee Maxamed Al Sharaafi loogu tarxiili lahaa dalka Kuweeyt, ayuu ciidanka ammaanku iminka dhaleecayn kulul u soo jeedinayaa hayadda socdaalka maadaama aanay hayaddu aqbalsanayn in tarxiilkani aanu ahayn mid la hir-gelin karo, sida uu sheegay Sven-Åke Eriksson, ahna sarkaal sare ee ka tirsan ciidanka xuduudaha ee magaalada Istockholm:
- Waxaan dareemayaa quusasho. Waxaan jeclaan lahaa in hayadda socdaalku dhageesato war-bixinta ciidanka ammaanka ee la xiriira amuurtan ee aanay un ku dhaga adeeygin in tarxiil un la hadal hayo. Si sahlan ayey u qaataan war-bixinnada aannu u gudbinno.
Afar sannadood ayaa ka soo wareegtey kolkii dhakhtarka qaran-laawe ah asalkiisu yahay falastiin ee Maxamad El Sharaafi uu dalkan magan-gelyo u soo galay isaga oo ka soo baqoolay dalka Kuwaayt, hase yeeshee maya ku helay dalabkiisii magan-gelyo doon. Bishii noveember ee sannadkii 2010 ayay hayadda socdaalku fayka dhakhtarkaa u gudbisay ciidanka ammaanka/xuduudaha ee magaalada Istockholm si dalka looga masaafuriyo.
Muddadaa oo ay ka soo wareegtay sannad iyo bar ayuu Maxamad Al Sharaafi weli dalka ku sugan yahay iyadoona dhowr jeer hore la isugu dayey sidii dalka looga masaafurin lahaa. Ugu yaraan afar jeer ayuu ciidanka ammaanku ku war-geliyay hayadda socdaalka in amuurtani tahay mid aan suurtagal ahayn kana baxsan bani'aadminimada, iyadoona ay intaa dheer tahay sida habsamida leh ee uu Maxamad Al Sharaafi isugu dayay siduu ciidanka ammaanka ula shaqeeyn lahaa.
Halka uu madax-waaxeedka ka howl-gala hayadda socdaalka Jesper Starkerud uu sheegay in masuuliyadda ugu ballaarani saaran tahay shakhsiga magan-gelyo doonaya kolka laga hadlayo howlaha ceenkaniya ah. Su'aasha meesha taala ayaa haddaba noqoneeysa: Muxuu tallaabo ah oo aanu hore u qaban ayuu Maxamad Al Sharaafi qaadi karaa?:
- Waa inuu qabtaa tallaabooyin intii hore ka badan, sida ay iila muuqato.
Tallaabooyin nooceeya ayaad ula jeeddaa. Maxaad ula jeeddaa tallaabooyin dheeriya? Ma noo sheegi kartaa tusaale waxyaabaha uu ku tallaabsan karo ee looga baahan yahay?
- Way igu adag tahay guud ahaan inaan caddeeyo waxa looga baahan yahay inuu qabto ama ku tallaabsado.